Andiany faha-5 : Hosantarina amin’ny « Bal masqué » ny hetsika ho an’ny gitara -
AccueilVaovao SamihafaAndiany faha-5 : Hosantarina amin’ny « Bal masqué » ny hetsika ho an’ny gitara
Mikaroka zava-baovao hatrany. Hotanterahina ny 6 ka hatramin’ny 15 avrily izao ny andiany faha-5 amin’ny hetsika ho an’ny gitara na ny « Festival de guitare ». Hiavaka izany amin’ity taona ity satria dia ho santarina amin’ny alim-pandihizana miafin’endrika na « Bal masqué ». Eny amin’ny CCI Ivato no hanatanterahana izany mandritra ny lanonam-panokafana ny hetsika. « Sambany teto amintsika ny hisian’izany tolotra izany izay sady fahafinaretan’ny maso no fialam-boly. Hiara-dia amin’izany ny dihy sy ny gitara», araka ny fanazavan’i Ravaka Narimanana, avy amin’ny fikambanana Maagma, mpikarakara ny hetsika. Hanomboka amin’ny 7 ora hariva ny hetsika, izay hatomboka amin’ny fakana sary, miaraka amin’ireo mpaka sary matihanina. Ankoatra ny mozika sy ny fandihizana dia hanamarika io alina io ihany koa ny fampisehoana dihy hiarahana amin’ireo tarika hiangaly izany sy filatroana lamaody. Hisy ihany koa anefa ny fitsarana ireo andriambavilanitra sy lehilahy tsara fianjaika indrindra izay hotolorana loka. Akanjo fitondra amin’ny lanonana mihaja no takiana amin’ireo vahiny, ka akanjo tohi-tena mihaja ho an’ny vehivavy, ary palitao sy velon-drirana kosa ho an’ny lehilahy. « Tsy maintsy mitondra saron-tava kosa ny rehetra amin’ny maha-bal masqué azy », hoy hatrany ny fanazavan’ny mpikarakara.
Hisy fizarana efatra kosa ny hetsika ho an’ny gitara amin’ny ankapobeny, dia ny anjaran’ireo tanora vao mianatra, ho an’ireo mpamorona, ny mpankafy ny gadona klasika ary ny fifaninanana « Sabotsy Mahaleo ». Hanamarika ny hetsika ihany koa ny fifaninanana mitendry ireo hiran’ny tarika Mahaleo, ary lalaovina amin’ny endrika sy fomba ankafizan’ny mpitendry azy. Amin’ny maha-hetsika iraisam-pirenena azy, dia ho maro ireo mpanakanto vahiny handray anjara amin’io hetsika io.